Tikidhada Jaban ee SNCB Iyo Qiimaha Safarka | Save A tareenka
Tikidhada Jaban ee SNCB Iyo Qiimaha Safarka
Guriga > Tikidhada Jaban ee SNCB Iyo Qiimaha Safarka
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Tikidhada tikidhada SNCB ee jaban iyo Qiimaha safarka SNCB iyo faa'iidooyinka.
mawduucyada: 1. SNCB waxaa kujira Tilmaamaha Tareenka
2. Ku saabsan SNCB 3. Aragti Sare Si Loo Helo Tigidhka Tareenka ee SNCB oo Jaban
4. Immisa ayey ku kacayaan tikidhada SNCB 5. Maxay ugu fiicantahay qaadashada tareenada SNCB, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Waa maxay farqiga u dhexeeya fasalka koowaad iyo kan labaad? 7. Ma jiraa rukun SNCB ah?
8. Intee in le'eg ka hor bixitaanka SNCB inuu yimaado 9. Waa maxay jadwalka tareenka SNCB
10. Saldhiggee ayaa u adeega SNCB 11. SNCB FAQ
SNCB waxaa kujira Tilmaamaha Tareenka
Shirkadda tareenka qaranka, SNCB, adeegtaa 244 milyan oo rakaab ah sanadkiiba.
Maalin walba, shirkadda tareenka qaranka ayaa qaadata 61 kun qof oo jooga Beljim gudaheeda iyo meelaha ay u sii gudbaan Yurub.
Shirkadda tareenka ee qaranku waa adeegga ugu weyn ee adeegga dhaqdhaqaaqa ee dalka Belgium.
Ku saabsan SNCB
Shirkadda tareenka Qaranka ee tareenka ee Belgium, SNCB, waxaa lagu aasaasay 1926.
SNCB waxay bixisaa adeegyada tareenka gudaha Biljimka iyo guud ahaan Yurub. Iyada oo leh tigidh sax ah, waxaad booqan kartaa dhammaan kuwa ugu fiican meelaha fasaxa ee Yurub. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo tigidhada ah iyo kaararka rukhsaynta, SNCB waxay daboolaysaa baahida qof walba.
Tareenadu waxay soo noqnoqdaan Brussels – Gent, Antwerp – used, Brussels – Namuur. Waxaad sidoo kale aadi kartaa wadamada deriska la ah Yurub gudaheeda adoo adeegsanaya tareenada SNCB.
Guud ahaan shirkadda, ku dhow 20,000 shaqaalaha ka shaqeeya tareenka iyo shabakadaha basaska waxay hubiyaan in rakaabku si nabad ah ku gaadhaan meelihii ay u socdeen maalin kasta.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso tareenka tikidhada SNCB
– Keydso Tareen A iPhone IOS App
Aragti Sare Si Loo Helo Tigidhka Tareenka ee SNCB oo Jaban
Tirada 1: Hore u sii dalbo tikidhadaada SNCB inta aad awooddo
Qiimaha Tigidhada SNCB kici markay maalinta safarku soo dhowaanayso. Waxaad naftaada ku badbaadin kartaa xoogaa lacag ah adiga oo jaale tikidhadaada tareenka ee SNCB inta ugu macquulsan laga bilaabo maalinta bixitaanka. Tikidhada tareenka ee SNCB ayaa la heli karaa goor hore 3 si ay u 6 bilood ka hor bixitaanka tareenka. Boos sii qabsashada hore waxay xaqiijineysaa inaad hesho tikidhada tareenka ee SNCB ugu kharash-badan. Iyaguna tiro ahaan way xadidan yihiin, markaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dalbato, ka jaban adiga. Si aad lacag ugu keydiso tikidhada tareenka ee SNCB, iibso tigidhadaada ASAP.
Tirada 2: Safarka SNCB inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa
Tikidhada tareenka ee SNCB ayaa ka jaban inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa, bilowga toddobaadka, iyo inta lagu jiro saacadaha maalintii. Waad iska hubsan kartaa inaad heleyso tigidhada tareenka ka jaban toddobaad gudihiis. Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista, Tikidhada tareenka ee SNCB ayaa ah kuwa ugu dhaqaalaha badan. Sababta oo ah mugga socdaalayaasha ganacsiga ee shaqada tagaya subaxa iyo fiidka, tigidhada tareenka ayaa ka qaalisan saacadahaas. Aad ayey uga jaban tahay in la safro wakhti kasta inta u dhexeysa subaxa dambe iyo ka hor safarka fiidka. Usbuuc-dhamaadka waa waqti kale oo ugu sarreeya oo loogu talagalay tareennada, gaar ahaan maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Qiimaha tikidhada tareenka ee SNCB sidoo kale way kordhayaan ciidaha dadweynaha iyo ciidaha iskuulka.
Tirada 3: Dalbo tikidhadaada SNCB markaad hubto jadwalka safarkaaga
Tareennada SNCB ayaa baahi weyn loo qabaa, iyo tartan yar, waxay wali yihiin xulashada ugu sareysa ee tareenada Beljam. SNCB way awoodi kartaa inay dejiso xayiraadaha tikidhada tareenka sida midka ay iyagu leeyihiin oo mamnuucaya tigidhka is-weydaarsiga ama soo celinta illaa ay tahay nooca ganacsiga ee tikidhada. In kasta oo ay weli jiraan degello internet oo aad ku iibin karto tikidhadaada gacan labaad dadka, SNCB ma ogolaaneyso iibinta tigidhka gacanta labaad. Sidee tani u caawineysaa inaad lacag dhigato? Dalbo tigidhkaaga keliya markaad hubto jadwalkaaga inuu kaa badbaadin doono inaad hal tikit laba jeer dhigto maxaa yeelay wax baa soo baxay oo ma isticmaali kartid tigidhka asalka ahaa..
Tirada 4: Iibso tigidhadaada SNCB ee ku yaal Badbaadinta A Tareenka
Badbaadinta Tareenka ayaa leh kan ugu weyn, ugu fiican, iyo heshiisyada ugu jaban tikidhada tareenka ee Yurub. Xiriirka aan la leenahay dad badan oo ka shaqeeya tareennada, ilaha tikidhada tareenka, iyo aqoonta aan u leenahay algorithms-ka tikniyoolajiyadda waxay siinaysaa Badbaadinta A Tareenka heshiisyada tikidhada tareenka ugu jaban. Kaliya kuma bixinno heshiisyada tikidhada tareenka ee jaban SNCB oo keliya; waxaan si isku mid ah u siineynaa beddelka kale ee SNCB waxaanna ku faannaa adeegga macaamiisha ugu fiican suuqa tareenka.
Immisa ayey ku kacayaan tikidhada SNCB?
Tigidhada SNCB waxay ka bilaabmaan € 2,5 illaa iyo sida ugu sarreysa € 20 ee safarka hal tareen ah. The qiimaha tigidhada tareenka ee SNCB Waxay kuxirantahay nooca tigidhada aad iibsato iyo goorta aad dooratid inaad safarto:
Jaangooyo € 2,50 – € 15.00 15 – € 30
Fasalka Koowaad € 10.50 – € 20 21 – 46
Maxay ugu fiicantahay qaadashada tareenada SNCB, oo aan lagu raacin diyaaradda
1) Waxaad tagtaa Xarunta Magaalada. Tani waa mid ka mid faa'iidooyinka tareenada SNCB marka la barbar dhigo diyaaradaha. Tareenada SNCB iyo dhammaan safarka tareenka kale meel kasta oo ka mid ah magaalo ilaa bartamaha ee magaalada xigta. Waxay ku badbaadineysaa waqti iyo qiimaha kabista garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada. Iyadoo joogsiga tareenka, way fududaan tahay inaad tagtid meel kasta oo magaalada aad u socoto. Macno malahan halkaad ka timid, Brussels, Antwerp, used, ama Liege, joogsiga bartamaha magaalada waa faa iidada ugu weyn ee tareenada SNCB!
2) Ku safridda diyaaradaha waxay u baahan tahay inaad joogtid garoonka diyaaradaha ugu yaraan dhowr saacadood kahor waqtiga duulistaada. Waa inaad maraysaa hubinta amniga kahor intaan laguu oggolaanin inaad fuusho diyaaradda. Tareenada SNCB, waa inaad saldhigga joogtaa wax ka yar 30 daqiiqado kahor. Markaad tixgeliso waqtiga ay kugu qaadanayso inaad ka raacdo garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada, waxaad ogaan doontaa in tareenada SNCB ay kafiican yihiin xagga wadarta waqtiga safarka.
3) Dusha sare, qiimaha tikidhada tareenka ee SNCB waxay umuuqdaan kuwa ka qaalisan tigidhada diyaaradaha miisaaniyada. Si kastaba ha ahaatee, markaad isbarbar dhigto dhamaan dacwadaha ku lugta leh, Tikidhada tareenka SNCB waxay leeyihiin heshiis qiimo fiican. Iyada oo ay kujirto kharashyo kale sida ajuurada boorsooyinka ee aadan aheeyn inaad ku bixiso tareenka, safraya SNCB waa hubaal kan ugu fiican.
4) Tareenadu waa kuwo deegaanka u roon markaad is barbar dhigto tareenada iyo diyaaradaha, tareenadu kor ayey u soo baxayaan. Diyaaradaha ayaa si ba'an u wasakheynaya jawiga iyagoo wata heerar sare oo kaarboon ah oo ay bixiyaan. Tareenada marka la barbardhigo wax badan ayey bixinayaan wasakhda kaarboon yar ka badan diyaaradaha.
Waa maxay farqiga u dhexeeya fasalka koowaad iyo kan labaad?
Waxaa jira fasalo kala duwan oo tikidhada SNCB ah oo loogu talagalay miisaaniyadaha iyo noocyada socdaalka. Waxaad iibsan kartaa tigidhka caadiga ah ee fasalka 1aad ama labaad. Tusaale ahaan, fasalka 2-aad ayaa sifiican ugu habboonaan doona safarada dhaadheer iyo safra miisaaniyadda. Laakiin haddii aad raadineyso meel aad lugaha kala bixiso ama aad tahay a socdaal ganacsi oo aad rabto inaad shaqeyso intaad safreyso, markaa fasalka 1aad ayaa kugu habboon adiga.
Ma jiraa rukun SNCB ah??
Muwaadiniinta reer Belgium, waxaa jira noocyo kala duwan oo rukumo ah, tigidhka Xilliga aan Xaddidnayn, iyo Xilliga Jaangooyada. Wixii caalami ah waxaan kuu soo jeedineynaa inaad waqti hore iibsato ka dibna waxaad heli doontaa ikhtiyaarka ugu jaban.
Labada kaarba waa laga gadan karaa:
– Tirinta tikidhada SNCB.
– Barnaamijka SNCB.
Tigidhada SNCB ee caadiga ah:
Tigidhada caadiga ah waa tigidhka tareenka ee ugu dabacsan ee ay SNCB bixiso. Sayidka, waxaad ku safri kartaa meel kasta oo ka mid ah Biljimka adoo wata tikidhka tareenka ee caadiga ah. Waa inaad ogaataa in tikidhada caadiga ah laga iibsaday khadka tooska ah, looma celin karo. Si kastaba ha ahaatee, haddii wax laga beddelay qorshooyinka, waad ku celin kartaa ama ku badali kartaa tigidhada tigidhada tikidhada. Intaa waxaa dheer, adeegan waa la heli karaa, maalin ka hor taariikhda bixitaankaaga, ama loogu talagalay 30 daqiiqado ka dib markaad iibsatay tigidhka.
Tigidhada Qoyska Weyn
Dhammaan xubnaha qoyska waxay ku raaxeysan karaan qiimo dhimis ballaaran tikidhada SNCB. Tusaale ahaan, carruurta ka yar 12 socdaal bilaash ah, iyo ilaa 50% tigidhada caadiga ah ee dadka waaweyn iyo carruurta 12. Waxaa intaa dheer, tigidhkan, waxaad ku safri kartaa dhamaan tareenada SNCB.
Kaarkani wuxuu shaqeynayaa marka lagu daro kaarka aqoonsiga sawir, oo ay kujirto da'da lahaanshaha.
Tigidhka Xilliga Jaangooyada
Muwaadiniinta reer Belguim waxay iibsan karaan Tigidhada Xilliga Jaangooyada, kuna raaxee safarada aan xadidnayn isla wadadaas. In si kale loo dhigo, qiimaha 10 bilaha rukunka, waxay u kala safri karaan labada jihoba inta jeer ee ay doonaan.
Tigidhada Usbuuca waa ansax Jimcaha-Axadda, la a 50% qiimo dhimis ku aado meel kasta oo aad tagto Belgium. Sidaas, laga bilaabo 7 pm jimcaha, waxaad u safri kartaa meel kasta oo ka mid ah Beljamka, fasalka 1aad ama 2aad. Intaa waxaa dheer, ereyadan gaarka ah waxay gaarayaan ilaa fasaxa dadweynaha sidoo.
Qiimaha Tareenka Brussels ilaa Ghent
Qiimaha Tareenka ee Antwerp ilaa Ghent
Qiimaha Halle ilaa Ghent
Bruges ilaa Qiimaha Tareenka ee Gent
Intee in le'eg ka hor bixitaanka SNCB inuu yimaado?
Way adagtahay in si sax ah loo saxo, laakiin Badbaadinta A Tareenka ayaa kugula talinaysa inaad timaadid 30 daqiiqado ka hor waqtiga bixitaankaaga. Iyadoo waqtigan la joogo, sidoo kale waxaad heli doontaa waqti kugu filan oo aad wax kaga iibsato waxyaabaha aad u baahan tahay safarka tareenkaaga sida ugu macquulsan.
Waa maxay jadwalka tareenka SNCB?
Waxaad ka heli kartaa waqtiga-dhabta ah boggayaga hore oo ah Save A tareenka Jadwalka Tareenka SNCB, Kaliya ku qor meesha aad hadda ku sugan tahay iyo halkaad rabto, waanuna ku tusin karnaa macluumaadka.
Qiimaha Tareenka ee Brussels ilaa Liege
Antwerp Qiimaha Tareenka Cunnada
Qiimaha Gawaarida Qiimaha Tareenka
Liege ilaa Qiimaha Tareenka Cunnada
Saldhiggee ayaa u adeega SNCB?
Saldhigga Brussels ee SNCB waa Brussels – Bartamaha, kaas oo ku yaal bartamaha Belgium.
Xarun kale oo SNCB ah ayaa ku taal Antwerp, Tareennada SNCB ka ambabaxo kana timaado Saldhigga Dhexe ee Antwerp, u dhow hudheelka quruxda badan ee Blue Astrid. Antwerp Central waa xarunta labaad ee tareenka ugu mashquulka badan gudaha Belgium.
Tareennada SNCB waxay ka ambabaxayaan magaalada Ghent Ghent Saint Pieters Idaacadda, taas oo ah magaalada seddexaad ee ugu weyn Belgium iyo tan ugu weyn Flanders.
Liege, Liege Guillemins waa xarunta dhexe ee tareenka ee SNCB. Sidaa darteed, Saldhiga tareenka ee Liege wuxuu isku xiraa Beljamka iyo wadamada deriska ah, kana dhigaysa mid ka mid ah xarumaha tareenka ugu mashquulka badan Wallonia. Waxaa intaa dheer, haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Jarmalka, Faransiiska, Luxembourg, ama Nederland ka timid Biljim, waxaad sifiican uheli laheyd tikidhadaada tareenka ee SNCB sifiican kahor.
used (Baaruud – Isla magaca magaalada oo ku qoran luqad kale oo caan ah) tareenka waa xarun kale oo mashquul SNCB ah oo ku taal Flanders. Tusaale ahaan, ka yimid Bruges, waxaad dalban kartaa tigidhka tareenkaaga mid kale meelaha caanka ah gudaha Belgium: Gent, Antwerp, iyo Brussels saacad ka yar. Saldhigga tareenka ee Bruges wuxuu ku yaal a 20 daqiiqado socod lug ah ka faras magaalaha, iyo fagaaraha quruxda badan ee Old City Markt.
Saldhiga tareenka ee SNCB ee kuyaala Leuven waa xarunta ugu weyn ee tareenka laga raaco ee ku taal gobolka Flemish Brabant ee dalka Beljam. Saldhiggan tareen ee mashquulka badan wuxuu isku xiraa gobolka Flemish iyo gobollada kale waana kan ugu sarreeya 5 xarumaha tareenka ee ugu mashquulka badan Belgium. Sayidka, aad awoodid safarka tareenka si ay u Brussels, Garoonka diyaaradaha ee Brussels, Leuven, Antwerp, iyo asal ahaan magaalo kasta oo Beljam ah.
Mechelen ama Malinas, magaalada Mechelen, sidoo kale waa mid ka mid ah saldhigyada tareenka ee SNCB ee ku yaal Belgium. Waxaad ka heli doontaa halkan 10 aaladaha, adeegaya khadadka tareenka ee Intercity, oo ay ku jiraan garoonka diyaaradaha ee Brussels kana yimaada Antwerp. Intaa waxaa dheer, waxaad ka iibsan kartaa tikidhada SNCB ee Amsterdam, iyo Luxembourg, sii maraya Antwerp iyo Brussels.
Baaskiil Ma Loo Oggol Yahay Gudiga Tareennada SNCB?
Baaskiiladaha waa loo oggol yahay tareennada SNCB. Haddii aad haysato baaskiil isku laaban, markaa waad ku raaci kartaa tareenka, lacag la’aan. Si kastaba ha ahaatee, noocyada kale ee baaskiillada ayaa kugu kici doona € 4 dheeri ah oo ah tigidhka tareenka.
Carruurtu Ha Ku Safraan Bilaash Tareennada SNCB?
Haa, laakiin ilaa iyo xaddi cayiman. Caruurta kayar da'da 12 safri doona bilaash markii uu weheliyo qof weyn oo rakaab ah.
Ma xayawaannada loo oggol yahay Tareennada SNCB?
Haa, waxaad ku soo qaadan kartaa xayawaankaaga tareenka, € 3 safarkiiba. Si kastaba ha ahaatee, Xayawaanku waa inuu ku jiraa leedhka ama boorso, ama dambiil.
Maxay yihiin habraaca lagu raaco SNCB?
Inta badan la Weydiiyo SNCB FAQ – Miyay tahay inaan horay u dalbado kursi SNCB ah?
Waxaad karaa keyd a waan ogahayat ka hor gudaha SNCB tareenada. Waxaad doono hel shaqsi kursi ka dib markii la sii qabsado, laakiin tani maahan qasab.
Ma jiraa internet Wi-Fi ah gudaha SNCB-ka??
Maya. Ma jiro Bilaash Wi-Fi internetka tareenada SNCB. Waxaad ku raaxeysan kartaa Wi-Fi bilaash ah saldhigyada tareenka ee SNCB.
Hadaad akhrido ilaa hada, hadda waxaad taqaanaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato tareennadaada SNCB oo waxaad diyaar u tahay inaad tikidka tareenka SNCB ku iibsato Save A tareenka.
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad u badali kartaa / fr / nl ama / es iyo luqado badan.